Budata VLC Media Player 3.0.16 maka Windows
Ikpo okwu: Windows |dị: 3.0.16 Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Windows (42.70 MB)
Budata VLC Media Player,
VLC Media Player, akpọkarị VLC netiti kọmputa ọrụ, bụ a free media player mepụtara nihi na ị na-egwu nile di iche iche nke media faịlụ na kọmputa gị na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Budata VLC Player - Free Media Player
Na-akwado ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndọtị faịlụ niile maka vidiyo na vidiyo na vidiyo, VLC na-ebute ụzọ netiti mmasị ọkpụkpọ mgbasa ozi nke ọtụtụ ndị ọrụ kọmputa ọbụlagodi na atụmatụ a naanị.
Inwe nhicha dị ọcha, VLC Player na-enye gị ọtụtụ nhọrọ dị iche iche ọbụlagodi noge nrụnye. Nwere ike ịhọrọ ndọtị faịlụ niile ịchọrọ igwu na VLC noge nrụnye, yabụ ị nwere ike igwu faịlụ mgbasa ozi na mgbatị faịlụ ị kwuru na VLC dị ka ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi ndabara.
VLC Player, nke nwere njirimara ọrụ nghọta dị mfe ma nwee nghọta nke ndị ọrụ kọmputa nke ọkwa niile nwere ike iji mee ihe nụzọ dị mfe, na-elekwasị anya na ịkpọ faịlụ mgbasa ozi. Mmemme ahụ, nke na-eweta ezigbo azịza dị elu na nke bara uru maka ndị ọrụ kọmputa nke ebumnuche ya bụ igwu egwu faịlụ mgbasa ozi nke ọma na ngwa ngwa, enweela ihe ịga nke ọma karịa ọtụtụ ndị asọmpi ya nahịa.
Na mgbakwunye, ịnwere ike ịnweta nhọrọ ntanetị dị iche iche maka sọftụwia ahụ, nke na-enye nkwado isiokwu maka ndị ọrụ na-agwụ ike na njirimara VLC Media Player nke kpochapụwo, na peeji nke onye nrụpụta, ị nwere ike ịmalite iji isiokwu ndị masịrị gị site na nbudata ha na kọmputa gị.
VLC Media Player, nke na-enye ndị ọrụ ọtụtụ nhọrọ ịmezi aha dị iche iche na ntọala dị elu na mgbakwunye nkwado nke isiokwu, na-anwa ịnye gị ọtụtụ ihe karịa ka ị na-atụ anya naka onye mgbasa ozi, dị mfe dị ka o kwere mee.
Site nenyemaka nke mmemme ahụ, nke na-enyekwa gị ọtụtụ ozi dị iche iche gbasara vidiyo ma ọ bụ faịlụ ọdịyo ị na-egwu noge ahụ, ị ​​nwekwara ohere ịdekọ ọdịyo ma ọ bụ vidiyo ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Site nenyemaka nke usoro ihe omume, ebe ị nwere ike ịgbaso iyi egwu ma ọ bụ vidiyo na-agbasa na ebe dị iche iche nịntanetị, ị nwere ike ịchekwa ọdịnaya ị na-ele ma ọ bụ na-ege na kọmputa gị, wee lelee ma ọ bụ gee ya ugboro ugboro ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Mmetụta dị iche iche na ntọala ị nwere ike iji mee ka vidiyo nke vidio ị na-ele ma ọ bụ egwu ị na-ege na-esokwa na ngọzi ndị enyere gị na VLC Media Player. Ihe ntanetị 12-channel na nhazi ụda dị mma na nsonaazụ nke ga-enyere gị aka iche onwe gị na gburugburu ebe dị iche iche na-echere gị na VLC.
Ewezuga ihe ndị a niile, VLC na-enyekwa nhọrọ dịka ịchacha, agba, ịgbakwunye mmiri mmiri, itinye nhọrọ nzacha dị elu na vidiyo, yana mmekọrịta netiti ọdịyo na vidiyo na nkwado ederede dị elu.
Nịtụle atụmatụ ndị a niile dị elu nke VLC Media Player nwere, o doro anya na ọ bụ onye ọkpụkpọ mgbasa ozi kachasị mma na nke kachasị elu na ahịa. Ọdịdị onye ọrụ ahaziri iche, ọrụ dị oke mma ị nwere ike iji, dị mfe iji, ọdịyo na usoro vidiyo dị elu na ọtụtụ ndị ọzọ na-echere gị na VLC Media Player.
Chụ customizable interface ngwọta.
Na-aga nihu na mmepe ya dị ka ihe mepere emepe.
Nhazi ọkwa nke menu Ntọala nime Mfe na Di elu.
Ike ịgụ ụdị ọdịyo na vidiyo niile.
VLC Media Player Ụdịdị
Nha faịlụ: 42.70 MB
Mmepụta: VideoLan Team
Kacha ọhụrụ na: 19-01-2022